नेपाल आज | सरकार ढल्न सक्छ, नेकपा फुट्न सक्छ ( भिडियोसहित)
सरकार ढल्न सक्छ, नेकपा फुट्न सक्छ ( भिडियोसहित)
शनिबार, १७ फागुन २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको अन्तरद्वन्द्व चरम महत्वकांक्षा र स्वार्थको उपज हो । विश्लेषक डा. उमेश भट्टराईका अनुसार यदि यही अवस्था रहने हो भने सरकार ढल्छ र नेकपा पनि फुट्छ ।
नेपाल आजसंगको विशेष कुराकानीमा डा. भट्टराईले नेताहरु जिम्मेवार र इमान्दार नभएका कारण गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बताए । मुलुकमा बढ्दै गएको विदेशी हस्तक्षेप र जनतामा बढिरहेको निराशा कुनैपनि बेला विष्फोट हुनसक्ने र यसले राजनीतिक दल, नेताहरु र अहिलेको व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
अहिले नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतमको समूहले जे जस्तो खेल खेलिरहेका छन् यो सबै सत्ता पल्टाउन हो । उनीहरु कसैलाई राष्ट्रपति, कसैलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष र कसैलाई अरु केही बन्नु छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि अधिनायकवाद र निरंकुश चरित्र छ । दुवै पक्षले आफनो महत्वकांक्षा र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेका छन् । मुलुक र जनताका उनीहरुका लागि गौण बनेका छन् ।
नेकपामा बामदेव गौतम, डा. युवराज खतिवडा लगायत जो जसको नाममा अहिले खेल भैरहेको छ, यी सबै मोहरा मात्र हुन् । खेल शीर्षस्तरमै छ । अझ नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारी र विदेशीसम्मको भूमिका नेकपाको अन्तरद्वन्द्वमा मिसिएको पाइन्छ ।
मुलुक सहज अवस्थामा छैन । देशका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन भैरहेका एक पूर्व मन्त्रीको पक्षमा उभिन्छन् भने त्यो जस्तो शर्मनाक विषय अर्को के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीमा जुन तटस्टता, निष्पक्षता हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । पूर्वाग्रह राखेको प्रधानमन्त्रीले गरेका काम विवादित हुन स्वभाविक हो ।
राजनीतिक दलहरुले गणतन्त्र त ल्याए, तर चलाउन जानेनन् । उनीहरुको महत्वकांक्षा यति धेरै बढेर गयो कि आफू बाहेक अरुलाई मान्छे नै गन्न छाडे । यो भनेको अधिनायकवाद र निरंकुश चरित्र हो । यसले विवाद मात्र होइन द्वन्द्व नै ल्याउन सक्छ ।
‘यदि मुलुकमा कुनै आतंकवादी घटना भयो र त्यसको निशानामा नेताहरु परे भने अचम्म मान्नु पर्दैन । मुलुकको परिस्थिति बिग्रदै गएको देखिन्छ । ’ डा. भट्टराई बताउँछन् ।